Vaovao - Manimba ny vatan'olombelona ve ny hydroxypropyl methylcellulose? Inona no tokony hotadiaviko?
Ny hydroxypropyl methylcellulose dia tsy manimba ny vatan'olombelona, ​​dia azo antoka sy tsy misy poizina ny hydroxypropyl methyl cellulose, azo ampiasaina ho additive sakafo, tsy manana hafanana ary tsy manana fanelingelenana amin'ny hoditra sy fifandraisana amin'ny membrane moka. Amin'ny ankapobeny dia heverina ho fividianana 25mg / kg azo antoka isan'andro, ny fitaovam-piarovana dia tokony hatao mandritra ny fandidiana.
Ny vehivavy mampinono dia mihetsiketsika raha mampiasa zava-mahadomelina, ary tsy nisy fanehoan-kevitra ratsy izany. Noho izany, tsy misy contraindications manokana ho an'ny vehivavy bevohoka sy mampinono. Ny fampiasana hypromellose amin'ny ankizy dia tsy miteraka fanehoan-kevitra ratsy kokoa raha oharina amin'ny sokajin-taona hafa, noho izany ny ankizy dia afaka mampiasa an'io vokatra io amin'ny lamina mitovy amin'ny olon-dehibe.
Toetran'ny hydroxypropyl methylcellulose
1. Ny haavon'ny haavo polyulose eter, ny lehibe kokoa ny lanjan'ny molekiola, ary ny avo kokoa ny fahitana ny vahaolana aqueous.
2. Arakaraka ny fihenan'ny tsiranoka (na fifantohana) ny eulululul eter, ny avo kokoa ny fahitana ny vahaolana aqueous. Na izany aza, tandremo ny fisafidianana fidirana mety mandritra ny fampiharana mba hisorohana ny fihoaram-pefy tafahoatra ary hisy fiantraikany amin'ny asan'ny rihitra sy ny beton. toetra.
3. Tahaka ny ankamaroan'ny rano, ny viscosity an'ny cellulose ether solution dia hihena amin'ny fiakaran'ny maripana, ary ny haavon'ny cellulose ether dia mihabe ny vokatry ny mari-pana.
4. Ny vahaolana Hydroxypropyl methylcellulose dia vatana pseudoplastic matetika, izay manana fananan'ny fanetezam-bidy. Arakaraka ny maha lehibe ny tahan'ny fanetezana mandritra ny fitsapana no mampihena ny viscosity. Noho izany dia hihena ny firaisan'ny rihitra noho ny hery avy any ivelany, izay mahatonga ny fanamboarana ny rihitra, ka miteraka fahaizan'ny miasa sy ny firaisan-kina.
Ny vahaolana hydroxypropyl methylcellulose dia maneho ny toetran'ny tsiranoka Newtonian rehefa tena ambany ny fifantohana ary kely ny viscosity. Rehefa mitombo ny fifantohana, ny vahaolana dia maneho tsikelikely ny toetran'ny tsiranoka pseudoplastic, ary ny ambony kokoa ny fifantohana, vao mazava kokoa ny pseudoplasticity.